Wax ka baro Xanuunka Neefta ama Xiiqda (Asthma) Qalinkii cabdi cawiye | Haldoornews
Wax ka baro Xanuunka Neefta ama Xiiqda (Asthma) Qalinkii cabdi cawiye
Neefsasho siyaado ah ama dhibaato neefsashada ka timaadda
Xiiq ama neefsasho cod leh
Quficid laga yaabo in ay ka sii darto habeenkii ama aroorta hore
Feedhaha oo giigsanaan laga dareemo
Daal in aad dareento
Xajiin ama xasaasiyad qabto
Aad leedahay qof qoyska ka tirsan oo neef qaba
Aad u nugushahay wasaqowga hawada
Aad la kulanto qiiq
Aad diiqo qabto
Qaadashada daawooyin kala duwan si:
Marinnada hawadu kuugu furmaan
Hoos ugu dhigaan jawaabta uu jidhku ka bixinayo xajiinta
Hoos u dhigaan bararka marinnadaada hawada
Hoos ugu dhigaan balqanka ama xabka
Ogaanshada waxa sababa calaamadahaaga.
Isticmaalidda mitirka lagu hubiyo neefta, loogana hortago in neeftu ku qabato.
Cabidda koob weyn oo cabitaan ah 1-2 saacadood ee kastaba.
Ka fogaanshada waxyaabaha laga sameeyo caananaha marka aad xiiq leedahay maxaa yeelay waxay ballaarin karaan xabka.
Daawada neefta mar walba wado. Qaado daawooyinka kuu qorsheysnaa xataa haddii calaamaduhu kaa tagaan.
Ka fogow cabidda sigaarka, shiishada ama qiiqa sigaarka.
Ka dheerow cuntooyinka, daawooyinka ama waxyaabaha kuu keenaya in calaamadaha neeftu kuu yimaadaan. Kuwaan waxaa loo yaqaannaa kiciyeyaal.
Ka fogow taabashada dadka hergebka ama ifilada qaba.
Naso oo cab cabitaanno fara badan marka ugu horreysa ee calaamado hergeb aad isku aragto.
Ku neefso safaleeti ama wax kale oo la isku daboolo cimilada qaboobaha.
Takhtarkaaga kala hadal jir dhiska si aad u xoojiso sanbabadaada.
Diiqada iska yaree.
Isku aragto qufac, xiiq ama neefsashadu kugu adag tahay.
Dareensan tahay in aad qaadato daawooyin ka badan kuwii uu takhtarku kuu amray.
Heerkulka jidhkaagu uu ka sarreeyo 101 darajo F ama 38 darajo oo C.
Isku aragto xab aan caddeyn ama kala cad ama aad ugu weyn in la qufaco.
Dhibaatooyin ay daawooyinku keeneen qabtid sida gariirid, jahawareer, isku yaacsanaan, calool kacsan ama dhadhanka oo kugu xumaada.
Aadan awoodin in aad sameyso hawlahaaga caadiga ah ama jir dhiska.
Aad isku aragto xiiq daran, neefsashada ama qufacu kugu adkaadaan.
Aad isku aragto laab xanuun.
Ay faruuryaha ama ciddiyaha faruhu boor ama buluug ku noqdaan.
Fadlan takhtarkaaga kala tasho neeftaada nooceeda iyo heerka ay marayso haddii aad dareento in daawooyinka aad la qabsatay ama wax ay kaa tari la’dahay.